Ebay Integration - Tengesa paEbay nePropar E-Export
Kugadzirisa yako Ebay.com chitoro kuri nyore nePropars!
Kutanga kutengesa paEbay nePropars, uye zvigadzirwa zvako zvichatengeswa mune 24 nyika dzakasiyana!
Zviri nyore kwazvo e-kutumira kune dzimwe nyika makumi maviri neshanu ine Propars Ebay kusangana!
Mirairo yako kubva kuibay inounganidzwa pachiratidziro chimwe chete nemamwe maoda ako ese.
Unogona kutengesa zvigadzirwa zvaunowedzera kuPropars pane ebay nekamwe chete kubaya.
Ebay, inova musika wekutanga wepamhepo, ichiri pakati pemisika mikuru pasirese. Ebay, iyo ine chikamu chakasimba chemusika munenge nyika dzese nechikamu, ndiyo inotungamira mune mamwe mapoka akadai seauto spare parts uye zvigadzirwa zvemaindasitiri. Iyo inzvimbo yaunofanirwa kunyatso ongorora zvinoenderana nechikwata chako chechigadzirwa uye nyika yawakananga.
Kuve pachikuva chese chinogoneka mu e-commerce kwakakosha zvakanyanya kune bhizinesi rako. Ebay ndiyo inofanirwa-kuve nepuratifomu yebhizinesi re e-commerce. Nemazana emamiriyoni evatengi uye mapuratifomu kwaunogona kutengesa nemitengo yekunze, inopa mabhizinesi mukana wakanaka.
Tengesa kuNyika makumi maviri nenhanhatu nePropar Ebay Kubatanidzwa
Ebay inoshanda munyika 26 dzakasiyana. Mutauro wekuzvarwa wenyika idzi unopa sevhisi uye uri pakati pemapuratifomu ane mukurumbira mune ese.
Propar yanga iri mhinduro mubatsiri weEbay kubvira 2016. Kuti uve mutengesi muEbay's ecosystem yepasi rose, Propar kubatanidzwa kunozadzisa zvese zvaunoda. Zvechokwadi, hazvibviri kutengesa munyika 26 dzakasiyana uye zvitoro pasina rubatsiro. Nekudaro, nePropars, unogona kubata ako ese Ebay zvitoro mupaneri imwechete nezvimwe zvitoro zvako zvepamhepo. Iwe unogona zvakare kubatsirwa nerutsigiro rwemutauro mupaneru yako kwaunogona kugadzirisa otomatiki ako ese mastock uye maodha. Zvigadzirwa zvaunonyoresa nePropars mumutauro wako zvinoshandurirwa mururimi rwaamai rwenyika uko zvinozotengeswa nekuburitswa. Pamusoro pezvo, zviyero zvekuyera zvezvigadzirwa zvako zvinoshandurwa kuita zviyero zvemuno zvechiyero zvinoshandiswa munyika makumi maviri nenhanhatu dzakasiyana, uye vatengi vako vangangove vatengi vanoratidza zvigadzirwa mumayuniti avo ekuyera.
Tora Mari Yako Nyore
Kunyanya mushure mekubviswa kwePaypal kubva kuTurkey, mabhizimisi anotengesa kana kuti anotarisira kutengesa paEbay akapinda nenzira yakaoma. Asi mazuva ano asara kumashure. Nemasevhisi ekubhadhara akadai sePayoneer, unogona kuendesa mubhadharo wako muchitoro chako kumaakaundi ako ekubhangi muTurkey.
Huwandu hwauchaendesa kuaccount yako yekubhangi nemari yekunze kana TL inotamiswa munguva pfupi uye nemitengo yakaderera yekomisheni.
Iwe unogona kubatsirikana kubva kukadzikiswa komisheni mitengo uye akasiyana mabhenefiti nekuwana rutsigiro kubva kuPropars timu yePayoneer account yako. Propars ndiye Payoneer's mhinduro shamwari muTurkey. Kana iwe usati uine account nePayoneer parizvino, inobvumira account yako kuvhurwa uye kupihwa kuchitoro chako cheEbay.